८५ सहसचिवको एकैचोटी सरुवा, को कहाँ पुगे ? - Everest Dainik - News from Nepal
८५ सहसचिवको एकैचोटी सरुवा, को कहाँ पुगे ?
काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी प्रशासनमा ठूलो परिवर्तन गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ८५ सहसचिवको सरुवा गरेका हुन् ।
उनीहरु बिभिन्न सेवा समूहका रहेका छन् ।
सरकारको कार्यक्षमता र प्रभावकारितालाई अझै सुदृढ पार्न सहसचिवहरुको सरुवा गरिएको प्रधानमन्त्री श्रोतले बताएको छ ।
को कहाँ पुगे त ?